Eqhubeka iphila surface eMhlabeni, ngakho umzimba wayo njalo asitholayo umthwalo ngenxa yesimo sezulu esibi umfutho womoya ikholomu. Uma izimo zezulu musa ukushintsha, awusebenzi uzizwe amandla adonsela phansi. Kodwa ngo izinkathi vibration uhlobo oluthile lwabantu uhlangabezana ukuhlupheka yangempela. Encishisiwe noma ukwanda kwemithwalo umfutho womoya nomuntu kuthinta ezingasehlela akuyona indlela engcono, ukubhidliza imisebenzi ethize.
Nakuba kubhaliswe ngokusemthethweni ukuxilongwa "meteozavisimost" alikho nhlobo, sisengabantu kuncike ekushintshashintsheni sezulu. Ukushintsha kwesimo sezulu kubangela yempilo ebuthaka, futhi ezimweni ezinzima kakhulu, abantu kufanele uvakashele odokotela kanye ukuthatha imithi. Kukholakala ukuthi 10% amacala meteozavisimost njengefa, njengoba kuboniswa enye yezinkinga zempilo.
Cishe njalo sincike izinguquko sezulu izingane is phetho sokukhulelwa ezinzima noma lapho bebeletha. Ngeshwa, imiphumela Ukuzalwa komntwana onjalo kungaba kukhona nengane isikhathi eside, ngezinye izikhathi ukuphila. izifo zokuphefumula, izifo sokuhlasela kwamasosha omzimba, umfutho ophezulu wegazi kanye hypotension kungaholela yokuthi abantu konke ukuphila kwakhe ngeke meteodependent. Ukusho ngokuthe ngqó ukuthi ongaphakeme umfutho womoya kuthinta abantu okufanayo, isifo esinzima kakhulu. Ukubonakaliswa meteozavisimosti ngamunye ine uhlamvu ngabanye.
I anda umfutho womoya
It kucatshangwa yokucindezeleka okwandayo lapho ifinyelela emamaki esingeqile 755 mm HG. Lolu lwazi luhlala etholakalayo, futhi ungafunda ke kusukela sezulu. Ukwanda kuqala umfutho womoya kuthinta abantu abanemizimba lokugula ngengqondo, kanye isifuba somoya. Abantu isifo senhliziyo ungakhululekile kakhulu. Lokhu kuyiqiniso ikakhulu lapho okwakhiwa ngalo ingcindezi gxuma kwenzeka ngokushesha kakhulu.
Indlela yokuthuthukisa isimo?
abantu Meteodependent kuyoba usizo hhayi kuphela ukwazi ukuthi ingcindezi kuthinta umuntu, kodwa yayihlanganisa nokuthi yini okufanele uyenze lapho liphuma khona. Phakathi nale nkathi, kufanele ugweme umsebenzi ngokomzimba kanye nemidlalo. Kubalulekile ukwandisa imithambo yegazi igazi kanye nokugcina imizimba uketshezi xaxa ngosizo nemithi oyinikezwe udokotela ngubani, kanye esebenzisa hot black itiye ingxenye encane utshwala uma azikho Izimo. Kungcono ukuba bathanda iwayini noma brandy.
ingcindezi okuphansi asemkhathini
Lapho ukucindezela kuyehla kube lizinga 748 mm HG, abantu meteodependent ukuzwa ukungakhululeki. Gipotonikam kubi ikakhulukazi, balahlekelwa amandla, kukhona isicanucanu nesiyezi. Okuphansi umfutho womoya kubonakala abantu ngenhliziyo isigqi sifo. isimo sempilo yabo ayiyinhle, kulokhu kangcono kolala ekhaya. Kodwa okubi kunakho konke mphumela umehluko ku labo bantu abanemizimba yokucindezeleka nokuzibulala. Baye anda umuzwa ukukhathazeka nokukhathazeka, okungaholela edabukisayo. Yingakho odinga ukukwazi isici okufana lomzimba wakhe ukuze bakwazi ukulawula imizwa yakho.
Ukuze uqonde ukuthi ongaphakeme umfutho womoya kuthinta abantu - lena kuphela ingxenye indaba. Udinga ukwazi ukuthi izinyathelo okudingeka zithathwe kuleli cala. Okokuqala sidinga banakekele nokufinyelela mahhala umoya fresh. Ungakwazi ukuvula iwindi noma ukuvula umnyango kuvulandi, uma ungeke uhambe. Ngezikhathi ezinjalo, abantu ngeke meteodependent ezinhle, ubuthongo umsindo. Nutrition nakho kufeza indima ebalulekile. Ukuqondanisa ibhalansi ion emzimbeni, kumelwe udle ucezu lwenhlanzi anosawoti noma ikhukhamba zifakwe emanzini anosawoti.
Lapho ehamba izindiza ezahlukene, noma ukugibela indoda entabeni iqala ukuzwa ukucindezeleka futhi ngizibuza indlela ongaphakeme umfutho womoya kuthinta abantu. Isici esiyinhloko ukuthi encishisiwe ingcindezi ngokwengxenye oxygen. I lwemithambo yegazi yokucindezela liyancipha igesi, okuyinto ama-receptor sikhuthaze imithambo carotid. I ngiyibona idluliselwa ku ubuchopho, okuholela kwezimila anda kwenzeka. Ngenxa ukupholisa yamaphaphu, umzimba okwazi ukulungiswa enikeziwe umoya-mpilo.
Kodwa kunento eyodwa okusheshayo kanye ukuphefumula anda ayikwazi nxephezela ngokugcwele ubunzima emzimbeni. Ukusebenza kahle jikelele kuyehla izici ezimbili:
umsebenzi wawanda kwemisipha yokuphefumula, ezidinga i-oxygen zokwenezela.
Elution-carbon dioxide kusuka emzimbeni.
Iningi labantu endaweni ephakeme, sibhekene esephule imisebenzi ethile bokuphila, okuholela izicubu hypoxia. Intaba ukugula ungaba ukubonakaliswa ezahlukene, kodwa ngokuvamile kuba iphika, isicanucanu, umongozima, isifuba somoya, ubuhlungu, izinguquko lokuhogela noma ukunambitheka, futhi arrhythmic umsebenzi inhliziyo.
Ukuqonda indlela ongaphakeme umfutho womoya kuthinta abantu, kuzosiza bushelelezi futhi adambise ukungaphatheki kahle isimo jikelele. Ukubonakaliswa entabeni ukugula singenzeka ngu ukungasebenzi kwekhono pheshana emathunjini. Inani enkulu mpilo zingene uyiswe ngenxa yokuthi umuntu emachibini kukhona msebenzi omkhulukazi kwezitho igazi-ukwakha. Ukuze siqonde ngokugcwele ukuthi umfutho womoya kuthinta blood pressure, kufanele inake nezinye izinto: lokushisa ukufundwa, umswakama, fluxes ngemisebe isivinini somoya, kwezulu nabanye.
Ngokuphazima kweso lapho izinga lokushisa zinkomba ezingasehlela akuyona indlela engcono kuthinta isimo sabantu. Ikakhulukazi sensitive ushintsho olunjalo "cores", kanye nalabo kwabantu abaye bahlupheka isifo senhliziyo noma unhlangothi. Kulezi nezikhathi, kubalulekile ukuthi ubeke umkhawulo umzimba ahlale edla ukudla ephansi usawoti. Temperature ibonwa ngu umzimba womuntu ngezindlela ezahlukene, kuya ngokuthi nomswakama. Uma luyanda, ukushisa mubi kakhulu. Ngezinye umswakama futhi wathonywa kakhulu nangabanye imvula. abantu Meteodependent kule nkathi bangezwa ubuthakathaka nekhanda.
Khumbula zabuna. Amazwibela "Dead Imiphefumulo", le nkondlo, NV Gogol